Xildhibaannada Federaalka ee ka soo jeeda Somaliland oo MW Farmaajo ku eedeeyay faragelinta doorashadooda. - Awdinle Online
Xildhibaannada Baarlamaanka Federaalka ee ka soo jeeda Somaliland ayaa Madaxaweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ku eedeeyay in uu faragelin ku haayo doorashada kuraasta baarlamaanka Soomaaliya ee Gobolada Waqooyi.
War Saxaafadeed ay soo saareen xildhibaanada laga soo doorto Somaliland loona diray Midowga Africa, Jaamacada Carabta, Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, Maraykanka , Midowga Yurub, Boqortooyada Ingiriiska iyo Turkiga oo ay heshey Mustaqbal ayaa muujinaya walaaca ay qabaan Xubnahaan oo ku aadan boob kuraastooda ay ku sameeyaan howl wadeeno ka socda Xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya.
Waxa ay sheegeen in aad ugu walaacsanyihiin in doorasharada Xildhibaanada Gobolada Waqooyi boobaan xubno sida ay sheegeen laga abaabulayo Madaxtooyada Soomaaliya, oo aysan halkaasi ka dhici doonin doorashada dhinacyadu u sinanyihiin.
Qoraalkooda ayay ku sheegeen in ay isku dayeen dhowr mar in ay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo kala hadlaan sida loo soo xulayo Xildhibaanada Gobolada Waqooyi ku matalaa Baarlamaanka Soomaaliya , hayeeshee Al baabada laga xirtay sida ay hadalka u dhigeen.
Waxa ay sheegeen in ay doorasho Xoogg ah ay ku arkayaan qaabka lagu soo xulayo Xildhibaanada laga soo doorto Gobolada Waqooyi ee dalka.
Waxa ay sheegeen in doorashadooda ay waardiyay doonan Ciidamo loogu magacdaray “Guddiga Amniga doorashooyinka” oo ay ku qeexeen kuwa la doonayo in ay soo saareen Xildhibaano uu wato Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Qoraalka ay Xildhibaanada soo saareen.
26 May 2020, ayaa Magaalada Muqdisho waxaa kulan ku yeesheen Xildhibaannada Somaliland ka soo jeeda ee ka tirsan labada Golle ee Baarlamaanka Soomaaliya iyo Wasiirada kumatala Xukumada Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre..
Ra’iisal Wasaare Kuxigeenka ayaa sidoo kale qoraalka ku sheegay in ay tani tahay horumar weyn oo laga gaaray helitaanka dhaqamada maamul wanaagga.
Hase ahaatee Senator Muxudiin Sheekh Cali Jaamac, Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka tirsan Senatorada Golaha Aqalka Sare ayaa Dowladda Federaalka ku eedeeyay in Xildhibaanada ka soo jeeda Somaliland ku hayso sad-bursi, isla-markaana ay dad gaar ahi wadato.
Dadka rog roga siyaasada ayaa Aaminsan doorashadaan in ay noqo doonto mid mid wax yar uu ka badan doorashadii Soomaaliya ka dhacdauy horaantii sanadkii 2017,taas oo lagu doortay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Previous article132-ruux oo ku xayirneyd Sacuudiga DFS oo dalka dib ugu soo celisay.
Next articleSomaliland Oo Maanta Shaacisay Kiisas Hor Leh Oo COVID-19 Ah